Kutheni AmaNgqina KaYehova Engayibhiyozeli IKrismesi? | IMIBUZO ABANTU ABAQHELE UKUYIBUZA
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiArmenia (saseNtshona) IsiAssamese IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBasque IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBosnian IsiBoulou IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChin (sesiHakha) IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChol IsiChuvash IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGalician IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKabiye IsiKabyle IsiKachin IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiKyangonde IsiLamba IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMapudungun IsiMarathi IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMende IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSoli IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTankarana IsiTarascan IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiValencian IsiVenda IsiVezo IsiVietnam IsiWelsh IsiXhosa IsiYoruba IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isi-Igbo isiLow German isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
Ubuxoki: Isizathu sokuba amaNgqina kaYehova angayibhiyozeli iKrismesi kukuba akakholelwa kuYesu.
Inyaniso: SingamaKristu. Sikholelwa ukuba usindiso lungoYesu Kristu.—IZenzo 4:12.
Ubuxoki: Niqhekeza iintsapho ngokufundisa amalungu azo ukuba angayibhiyozeli iKrismesi.
Inyaniso: Sizikhathalele kakhulu iintsapho, yaye sisebenzisa iBhayibhile ukuze sizakhe zomelele.
Ubuxoki: Niphoswa “ngumoya weKrismesi” wokupha, woxolo emhlabeni nomoya omhle ophakathi kwabantu.
Inyaniso: Sizabalazela ukupha nokuba noxolo yonke imihla. (IMizekeliso 11:25; Roma 12:18) Ngokomzekelo, indlela esiziqhuba ngayo iintlanganiso zethu nendlela esishumayela ngayo ivisisana nomyalelo kaYesu othi: “ Namkele ngesisa, yiphani ngesisa. ” (Mateyu 10:8) Ngaphezu koko, sifuna abantu bajonge kuBukumkani bukaThixo njengethemba lokwenene lokuzisa uxolo emhlabeni.—Mateyu 10:7.
UYesu wayalela ukuba sikhumbule ukufa kwakhe, hayi ukuzalwa kwakhe.—Luka 22:19, 20.
Abapostile nabafundi bakaYesu benkulungwane yokuqala babengayibhiyozeli iKrismesi. IThe New Catholic Encyclopedia ithi, “ itheko lokuzalwa kukaYesu laqaliswa emva ko-243 [C.E.], ” kwinyaka engaphezulu kwekhulu wafayo umpostile wokugqibela.
Abukho ubungqina bokuba uYesu wazalwa ngoDisemba 25; iBhayibhile ayiwuchazi umhla awazalwa ngawo.
Sikholelwa ukuba uThixo akayifuni iKrismesi kuba ivela kumasiko nezithethe zabahedeni.—2 Korinte 6:17.
Kutheni iKrismesi iyingxaki kumaKristu?
Abaninzi basayibhiyozela iKrismesi nakuba besazi ukuba inemvelaphi yobuhedeni yaye iBhayibhile ayiyixhasi. Abantu abanjalo banokubuza: Kutheni amaKristu efanele angayenzi into eyenziwa ngabanye? Kutheni izakuba yingxaki nje le?
IBhayibhile isikhuthaza ukuba sizicingele, sisebenzise ‘ amandla engqiqo. ’ (Roma 12:1, 2) Isifundisa ukuba siyixabise inyaniso. (Yohane 4:23, 24) Ngoko, ngoxa sinomdla kwindlela abasijonga ngayo abanye, siza kunamathela kwimigaqo yeBhayibhile nokuba oko kubangela singafunwa ngabantu.
Nangona thina singayibhiyozeli iKrismesi, siyayihlonipha indlela abanye abayijonga ngayo. Asibaphazamisi abanye xa bebhiyozela iKrismesi.
Isenokukothusa imvelaphi yezithethe zeKrismesi ezintandathu ezaziwayo.
Ukuba kunye nentsapho nabahlobo, ukunceda abasweleyo nokukhumbula uYesu—zonke ezi zinto zibalulekile. Yintoni eyona nto ibaluleke kakhulu?